4 qof oo uu ka mid yahay nabadoon Yaasiin Cabdi Samad oo loo taxaabay xabsiga wayn ee magaalada Garowe. – Radio Daljir
Diseembar 23, 2012 8:04 b 0
Garowe, Sept, 23, 2012 – Hawl-galo habeenkii xalay ahaa ay gudaha magaalada Garowe ka sameeyeen ciidamada ammaanka ayaa lagu xiray dad uu ka mid ahaa nabadoon Yaasiin Cabdi Samad oo ka mid ahaa waxgaradka sida wayn looga yaqiinay gobollada Puntland.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya Laamaha ammaanka ayaa ku waramaya in isla maantay xabsiga wayn ee magaalada Garowe loo dhaadhiciyay Nabadoon Yaasiin Cabdi Samad, iyo 3 nin oo uu ka mid ahaa agaasime-kuxiggeenkii hay?adda daryeelka bulshada Puntlnad.
Egniner C/risaaq Burgal oo ka mid ahaa wax-garadkii sheegtay inay Garowe u yimaadeen shir looga tashanayo aayaha Puntland ayaa idaacadda Daljir u xaqiijiyay inuu dib u helay xoriyadiisa, kaddib markii xalay la geeyay saldhiga dhexe ee magaalada Garowe.
Ma jirto illaa xilligaan war cad oo kasoo baxay dawladda Puntland oo ay uga hadlayso xiriga nabadoonnada, waxaana idaacadda Daljir ay isku dayday inay xog ka hesho dhanka dawladda balse arrintaasi waa ay noo suurto-gali wayday.
Xariga nabadooyin Yaasiin Cabdi Samad ayaa la tilmaamayaa inuu salka ku hayo shir nadoonku uu tilmaamay inuu ka furmayo Garrowe, kaasi oo looga arrinsanayo Mustaq-balka iyo aayaha Puntland, waa sida uu hadalka u dhigay mar uu shalay warbaahinta kula hadlay magaalada Garowe.
Dhinaca kale, isla shirkaasi shalay waxaa dhankiisa baadil ku tilmaamay guddoomiyaha gobolka Mudug Cabdi Xirsi Cali (Qarjab)
Amiir Maxamuud Yuusuf Ciise oo si diirran loogu soo dhaweeyay Gaalkacyo, (Sawirro).